हल्का भुटेको ६ पोटि लसुनको सेवन गर्नुहोस्, २४ घण्टाभित्रै यस्तो चमत्कारिक फाइदा ! – Suchana Hub
हल्का भुटेको ६ पोटि लसुनको सेवन गर्नुहोस्, २४ घण्टाभित्रै यस्तो चमत्कारिक फाइदा !
काठमाण्डौ । हाम्रो भान्सामा पाइने लसुन धेरै प्रकारको परिकार तयार गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। लसुनले खानाको स्वाद मिठो बनाउन मात्र सहयोग नगरेर स्वास्थ्यको लागी पनि निकै लाभ्दायिक रहन्छ । यसले पाचन प्रणाली बलियो बनाउँछ। लसुनको सिधै सेवन गर्नु पनि निकै नै लाभदायक हुन्छ।
हालै गरिएको एक रिसर्चका अनुसार हल्का भुटेको लसुन नियमित रुपमा सेवन गर्नाले २४ घण्टा भित्र उसको शरीरमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थाल्छ। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
उक्त अनुसन्धानका अनुसार ६ वटा भुटेको लसुन खाएको एक घण्टामा लसुनले पौष्टिक प्रभाव दिन थाल्छ भने २ देखि ४ घण्टामा, हाम्रो शरीरले यी लसुनबाट निकालिएको एन्टी-अक्सीडेन्ट तत्वहरू अवशोषित गर्दछ । यसको सेवनले शरीरमा रहेका क्यान्सरका कोषहरु मर्छन् र हाम्रो मेटाबोलिजम मजबूत गर्नुका साथै शरीरको अतिरिक्त बोसो पनि पगाल्छ।
साथै लसुनको सेवनले हाम्रो रगतमा रहेको संक्रमण हटाउने काम गर्छ र साथै धेरै रोगहरू समय भन्दा पहिले नै निकै पार्न मद्दत गर्छ।
Previous प्रदेश अस्पतालका ६ चिकित्सकमा सङ्क्रमण देखिएपछि
Next बुटवलमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु